I-Digimind: I-Social Media Analytics yebhizinisi | Martech Zone
I-Digimind: I-Social Media Analytics yeBhizinisi
I-Digimind ihola inkampani yokuqapha yezokuxhumana ye-SaaS kanye nenkampani yezobunhloli yokuncintisana esetshenziswa izinkampani zamabhizinisi nezinhlangano ezisebenza nabo. Inkampani inikeza izixazululo eziningi:
I-Digimind Yomphakathi - ukuqonda izithameli zakho, ukukala ukumaketha kwakho kwezenhlalo, nokuhlaziya idumela lakho.
Ubuhlakani beDigimind - inikeza ukuqapha kokuncintisana nezimboni ukuze ukwazi ukulindela amashifu emakethe futhi ubone amathuba ebhizinisi.
Isikhungo Sokuyala Komphakathi - isikhungo sokubonisa sesikhathi sangempela ukukhombisa ukubonakala komphakathi komkhiqizo wakho.
Nge-Digimind Social, ungaqapha, uhlaziye, uhlanganyele, ubike, ulinganise i-ROI, futhi uphathe idumela lakho online.
I-Digimind ihlukile ngoba basebenzisana nabo Ditto futhi bahlanganisa uhlelo lokuqashelwa kwesithombe kuthuluzi labo lamathuluzi, benikeza ama-brand ithuba lokuqapha ukubalulwa komphakathi okungabonakala ngaphandle kokukhulunywa ngombhalo!
Le ntuthuko ingasetshenziswa ngezindlela eziningana:
Ukuhlaziywa kokusebenza woxhaso noma wobambiswano ngesikhathi somculo, ezemidlalo noma umcimbi wamasiko, kanye nokukala ukuvezwa komkhiqizo ngokuya ngokuthunyelwe okubukwayo okungasho lutho ngomkhiqizo ngokubhala.
Thola umgqugquzeli omusha imiphakathi noma amanxusa omkhiqizo angaba khona athumela izithombe zomkhiqizo kodwa angazisho ngombhalo.
Thola ukuqonda okucacile kwe- imikhuba yabathengi nemizwa maqondana nemikhiqizo nezinsizakalo zomkhiqizo.
Ukuvikelwa komkhiqizo elwa nokukhwabanisa, njengemikhiqizo yomgunyathi, ngaleyo ndlela kuncishiswe inkinga engaba khona.
Ubuhlakani Bokuncintisana Komphakathi
Okomphakathi esikalini - Thola ukufinyelela ku-Twitter Firehose, Pinterest, Instagram nakuwo wonke amanethiwekhi amakhulu wokuxhumana nabantu ngezingcezu zolwazi ezingaphezu kwezigidi eziyi-120 ezibhekwayo nsuku zonke.
Ukuqapha Okuthuthukile - Thola ukufinyelela kumathuluzi wokukhipha, abakhasi be-intelligence, imithombo evikelwe nge-password kanye newebhu engabonakali.
Imayini Yombhalo - I-Natural Language Processing Technology isuselwa ekufundeni komshini nasezinjini zokuhlaziya ze-semantic zokuhlukaniswa ngezigaba okuzenzakalelayo nokutholwa komcimbi.
Ukuhlaziywa Kwesikhathi Sangempela - Ukuhlaziywa kwesikhathi sangempela kwedatha yomlando enezinjini ezi-14 zokuhlaziya ezikhethekile.
Ukusebenzisana Nezenhlalo - Phatha amaphrojekthi womhlaba wonke wamaqembu wabo bonke osayizi ngokuphathwa kwamalungelo, izindlela zomphakathi kanye nezici zokusebenzisana.
Ukukhishwa - Izincwadi zezindaba, imibiko ephrintiwe, izexwayiso, izinhlu zokubuka, amawebhusayithi - kokubili kudeskithophu nakuselula (kufaka phakathi i-iOS ne-Android).
AbakwaSony bakhethe iDigimind yemisebenzi yethu yezokuxhumana njengoba ithuluzi labo ligcwalisa izidingo zethu, kuhambisana namakhasimende aqinile kanye nesikhathi esisheshayo sokuguqula izicelo zethu. UTan Khim Lynn, Umphathi Webhizinisi lakwaSony
Qala Isilingo Samahhala se-Digimind
Tags: ukumbaukuqonda kwe-digiminddigimind kwezenhlalodittoamalebhu we-dittoisikhungo somyalo wezenhlaloimithombo yezokuxhumana yebhizinisiukuqashelwa kwesithombeizibalo zemidiya yezenhlalo zesikhathi sangempelaisikhungo somyalo wezenhlalosocial mediaanalytics media socialukuqapha ezokuxhumukubika ezinkundleni zokuxhumanaimayini yezenhlaloukumba umbhaloukulalela okubukwayo
Imikhuba Engu-11 Engalungile Ye-imeyili Yokugwema Ngaphandle kokuthi Ufuna Ababhalisile Abathukuthele
Izindlela ezi-6 ezihamba phambili ezizokwandisa ukubamba iqhaza kwenhlolovo yakho yamakhasimende